Ny tosika ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2018 5:03 GMT
Navotsotra i Mohsen Al-Awaji rehefa nogadraina nandritra ny 11 andro, ary mieritreritra i Aya fa ity hetsika nataon'ny governemanta ity dia lesona azo tsoahina ho an'ny Saodiana: “Sahy manakiana ny governemanta ve ianao satria afaka manao izany amin'ny fotoana rehetra, sa esorina aminao ny fahafahanao sy ny fahamendrehanao.” Toa faly tamin'ny famotsorana an'i Al-Awaji i Riyadhwai, saingy tsy nanaiky ny hevitra sasany noresahan'i Al-Awaji nandritra ny fandaharana resadresaka tamin'ny fahitalavitra Koesiana talohan'ny nisamborana azy izy. Ny lohahevitra noresahana dia ny fitondran'ny vehivavy fiara, ary manana fijery mifanohitra amin'izany i Al-Awaji. Mihevitra i Riyadhawi fa naniratsira ny fiarahamonina Saodiana (Arabo) i Al-Awaji rehefa namaritra ny tanora Saodiana ho “mafàna fo ara-nofo”, ary nanao hadisoana goavana tamin'ny fampitoviana ny rehetra.
Prometheus namoaka lahatsoratra (Arabo) momba ny tantaran'i Abdul-Rahman, lehilahy Afghana niova ho Kristianina, ary mihevitra izy fa tsy misy olona manimba ny finoana silamo ankoatra ny Miozolomana tenany. “Tsy misy ifandraisany amin'ny zava-mitranga eto ny Islamo. Mazava tsara ny Korany fa tsy misy ny “fanerena amin'ny fivavahana”, ary resaka fahalalahan'ny tsirairay ny mino na tsia,” hoy izy nanoratra. Lohahevitra hafa mahaliana azy ny antontan'isa vaovao vao haingana izay nitatitra fa nandresy ny mpifandrina aminy Al Jazeera tamin'ny isan-jaton'ny mpijery tao Arabia Saodita ny fantsom-baovao Al Arabiya. “Misy ny fahasamihafana eo amin'ny fitantarana vaovao amin'ny fomba matihanina sy ny tsy mitanila, izay ataon'ny Al Arabiya, sy “mametraka” vaovao ary mamolavola azy ireo hampiroborobo ideolojia ara-politika sasantsasany na foto-kevitra manohana. Izany indrindra no ataon'i Al Jazeera,” hoy izy nanampy.
Nilaza i Jaded Saudi fa marary sy reraka noho ny Arabo mankahala izay rehetra Amerikana/Tandrefana izy. Nanoratra izy hoe:
Halako rehefa manodina ny zava-drehetra manodidina izy ireo ary manao izany tahaka ny hoe ny Amerikana no manenjika azy ireo amin'ny fomba rehetra mahatsikaiky. Halako rehefa manely tsaho momba ireo marika sy orinasa sasantsasany (tsarovy ilay hafatra anti-Miozolomana izay “niseho” tao amin'ny fangon'ny Coca-Cola mivaky hoe “Tsy mila Mohammed, Tsy mila Lameka”?) izy ireo.
“Sarotra ho an'ny lasibatra ny mahatsiaro fa olona tahaka azy ny namono azy, ary lasa tafintohina izy rehefa mahatsapa fa manana zavatra maro iombonana izy ireo.” Araka ny voalazan'i Abu-Joory fa ny maoralin'ny sarimihetsika (Arabo) Munich, notontosain'i Steven Spielberg izany.
Nandritra ny fitsidihana vao haingana tao amin'ny fivarotam-boky lehibe iray tao Riyadh, nahatsikaritra zavatra nanelingelina azy i Taqwa, nahatonga azy ho resy, ambany, ary reraky ny olona mametraka fetra aminy noho ny maha-vavy azy. Hoy izy:
Toa tahaka ny ao anaty sampana iray ny vehivavy rehetra. Ny fizarana ho an'ny boky momba ny “Vehivavy sy ny fanambadiana” (na zavatra toy izany), “Hatsaran-tarehy”, sy “Tantaran'ankizy”. Nilaza fizarana iray aho, satria nifanakaiky avokoa izy rehetra. Ara-virtoaly, tsy nisy ny vehivavy tao amin'ireo sehatra hafa (politika, toekarena, tontolo iainana, varotra tsara indrindra, fitantanana, siansa, sns) ao amin'ny trano fivarotana.
Mamaly ny fangatahan'ny mpamaky iray, mamoaka lahatsoratra momba ny fiainana ao Riyadh amin'ny fomba fijeriny manokana i Tala Al-Bakr. “Any Riyadh, sarotra be ny miala amin'ny mahazatra anao satria tsy misy zavatra hafa hatao manokana miaraka amin'ny fianakavianao ankoatra ny mankany amin'ny toeram-pisakafoanana,” hoy izy.
AbOd nanambara ny fanombohan'ny tranonkalam-baovao iray izay nofaritany ho safidy hafa Arabo manoloana ny fitaovana marika sosialy malaza del.icio.is. “Misy amin'ny teny Arabo sy Anglisy izy amin'izao fotoana izao, ary ampiana fiteny maro tsy ho ela, toy ny teny frantsay izay ampiasain'ny mponina Afrikana Avaratra,” hoy izy nanoratra.
Ary farany, Amer Al-Sadiq manana taratasy ho an'ireo mpandoto mailaka sy rindrina: “Ahoana ny fahatsapanao raha misy olona mandefa salakan-jaza (couche) any amin'ny boaty mailaka anao? Ahoana no ahafahanao manao izany amiko?!? Inona no tsy mety aminao? ? Nanakorontana ny filaminan'ny androko ianao, niady sy niaritra be aho mba hanalana ny sarin'ny salakan-jazanao amin'ny lohako. “